Akucaci ngekusasa labalingisi boMuvhango
Charles Khuzwayo | November 13, 2021
ABALINGISI boMuvhango basebumnyameni ngekusasa labo njengoba sekuqale inyanga yesine bebhuquza emakhaya.
Okwenza ikusasa labo lingacaci ukuthi kuze kube yimanje abakazivuseleli izivumelwano zokusebenzisana nenkampani edidiyela lo mdlalo, iWord of Mouth Production. IMuvhango wumdlalo owuchungechunge okhonjiswa kuSABC 2 phakathi nezinsuku ngo-9 ebusuku. Umthombo, ozazi zonke ezenzeka kulo mdlalo, uthe sekuphele inyanga yesithathu kunenkombankombane phakathi kweWord of Mouth nenhlangano yokusakaza kuleli, iSABC. Omunye ukhomba omunye esweni bese omunye evikela iso lakhe mayelana nokuvuselelwa kwezivumelwano zabasebenzi nezalo mdlalo.
Uqhuba lo mthombo uthe okuphatha kabi abalingisi ukuthi akekho obazisayo ukuthi kwenzekani ngezivumelwano zabo nabalo mdlalo.
"Bazimisele ngokwazi ukuthi basazodingeka yini kwisizini ezayo noma sebechithwa unomphela.
Okubuhlungu ukuthi manje kusondela amaholidi kaKhisimuzi. Abazi bazothathani bahlanganise nani ukuze kudliwe kahle emakubo kanti abanye abakayikhokheli imizi nezimoto." Okhulumela lo mdlalo, uThanduxolo Jindela, uphike walala ngomhlane ukuthi kunezinkinga kuMuvhango.
"Abalingisi basahlabe ikhefu laminyaka yonke. Njalo sihlaba ikhefu lezinyanga ezimbili onyakeni. Njengoba nani niphumula ngamaholidi kaKhisimuzi, thina siphumula ngalezi zinyanga," kushaya ngezimfishane uJindela.
Yize esho kanje uJindela kodwa Isolezwe NgoMgqibelo lithole ukuthi bavamise ukuhlaba ikhefu ngo-Agasti nangoSepthemba kuphela njengoba isizini entsha ize iqale ngo-Okthoba kodwa kuze kube yimanje abakabuyeli emsebenzini.
Ephawula okhulumela iSABC futhi oyiGroup Executive: Corporate Affairs and Marketing kule nhlangano, uNksz Gugu Ntuli, uthe sebeziphothulile izingxoxo nenkampani ekhiqiza iMuvhango futhi sebenikeziwe nencwadi eyigunyazayo ukuba iqhubeke nomsebenzi. Uthe inkinga ekhona okufanele yaziwe ukuthi ngenxa yobubanzi nesikhathi esinqunyelwe ukusakazwa koMuvhango, igunya kufanele lihambisane nemigomo yeHhovisi likaMgcinimafa.
"ISABC bekufanele iqinisekise ukuthi konke kwenzeka ngendlela efanele futhi kulandelwa yonke imigudu," kuphetha uNksz Ntuli.
Akukhona okokuqala kuba nobuhixihixi kulo mdlalo njengoba nango-2019 bagcina abalingisi bebeke phansi amathuluzi ngoba becikwa ukungaholi izinyanga ezimbili, okungu-Okthoba noNovemba. Owayekhulumela lo mdlalo, uKarabo Mtshayelo, wakhomba ngenjumbane iSABC. Kwenzeka lokhu nje nyakenye ngalezi zikhathi kwake kwaba namahlebezi ayethi iSABC isikaza ukuwuvala lo mdlalo kodwa le nhlangano yawachitha. Kuyophela iminyaka ewu-25 ngonyaka ozayo lo mdlalo usakazwa yile nhlangano njengoba waqala ngo-1997.